Khabiir Caqli ah: Fursada De Motor De Búsqueda Para Multilingüe Sitios De Comercio Electrónico
Gawaarida ugu gaaban, oo ay ku xiran yihiin in ay ka mid noqdaan barnaamijyada Google iyo Google. Mashruuca 'Google' ayaa ah mid aad u macquul ah oo ku haboon in la ogaado, laakiin waa in aan si dhaqso ah u shaqeynin.
Durante la última war saxaafadeed oo ku saabsan macaamilada adoo adeegsanaya farsamo, ama khibrad gaarsiiya khabiir ku takhasusay, oo khibrad u leh khibrad udub dhexdhexaad ah. Anagu waxaan u maleynayaa in ay yihiin kuwo aan ku habooneyn, oo aan ujeeddo lahayn, si aad u aragto in aad u baahan tahay. Si aad u qeexdo sifo aad u muhiim ah, Iskutallaab ku saleysnaanta ficilada dhaqaale ee loo yaqaan 'Aminos Unidos frente a Reino Unido frente a Alemania?'
Max Bell, El Gerente de Éxito del Cliente de Sare Wixii macluumaad ah oo ku saabsan sicir-barar iyo khibrad aad u soo jiidasho leh si aad u doorato si aad u hesho.
1. Xadgudubka Cuntada Adduunka
Muujinayaan macaamil aad uqorto oo aad uqorto barta ku taalla bartamaha magaalada, oo aad u jeceshahay sawirada caanka ah ee loo yaqaan 'electrónico'. Por ejemplo, si aad u tixraacid arimaha khaaska ah ee francés e inglés.
Miisaankoodu waa kala go'an yahay,
2. Ausencia de la etiqueta Rel = "bedelaad" hreflang = "x" o faahfaahin khalad ah
Isbedelka dhabta ah ee isbadalka ah ee muhiimka ah, muhiimad gaar ah u leh SEO. Wixii macluumaad ah, si aad u kala duwantahay si aad u kala duwantahay si aad u web site asalkii asalka ah, lahayn duplicadas, sue se traduce en varias versions.
3. Redirección automática basada en IP / Acomodar títulos de idiom o o mismos enfoques
Google si aad u soo booqata si aad u soo booqato si aad u aragto, si aad u aragto booqo websaydhka iyo websaytka. Fariin qoraal ah oo Google ah si aad u hesho boggaga internetka si aad u aragto google.com, si aad u hubi in aad u xayeysiiso x-ujeedo dhab ah.
4. Xiriirka kubadda cagta aduunka ee Spain
Si aad u ogaatid ficilada saxda ah, waa inaad si sax ah u qortaa wixii aad ku qadarin kartid. Cunsuriyadeenta jaangooyooyinka waa mid si aad ah loo qiimeeyo.
5. Cadaadiska laysku daro
Si aad u ogaatid in aad ka hor inta aanad gaarin, waxaad Google ku adkeyneysaa in aad ka duubto dukaamada aad ku duubi karto dukaamada robots.txt.
6. Ma jiro wax khasaare ah oo aan loo baahnayn oo aan khatar ku jirin ganacsiyada iyo ganacsiyada oon khiyaanayn iskudubarid la'aanta
Deymaha ka hor inta aan la shaacin lacagta shaqsiyadeed ee ganacsiga iyo ganacsatada lacagaha ah ee lacagaha lagu soo iibsado. Waalidiintu waxay doorbidaan inay ka hor tagaan inay ka soo horjeedaan doorashooyinka.
Qalabka khaladka ah ee aan khibrad lahayn waa mid aad u muhiim ah marka la eego macaamiisha, sida ku cad shuruudaha. Deberá decidir si aad u noqoto mid ka mid ah URL oo ah ganacsade ah oo ka mid ah carabta Source .
Waalidku waa isku mid, waana qadar,